Ukujonga ihlathi kunye nomgama wokuhamba ukuya kwiikhefi - I-Airbnb
Ukujonga ihlathi kunye nomgama wokuhamba ukuya kwiikhefi
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMel
IDwellingup Retreat likhaya eliyimbali elisandul 'ukulungiswa kunye nehlathi elihle lokubalekela ngaphandle kwedolophu yaseDwellingup. Yenziwe ukuze uphumle uze ujonge ihlathi likarhulumente kwiveranda entsha yamaplanga. Le ndlu inezinto zale mihla ezifana NEWIFI engenamida, umatshini omtsha wokuhlamba impahla, umatshini wokomisa impahla negumbi lokuhlambela elitsha namagumbi ahonjisiweyo asandul 'ukuhonjiswa. Le ndlu inamagumbi okulala amane ( enye ikwisitudiyo esikhulu ngasemva kwendlu) Azikho iindwendwe eziyi-8 ezinokuhlala ngenxa yesivumelwano selayisensi
Ineyadi evaliweyo engasemva, elungele abantwana abanendawo enkulu enengca kunye ne-BBQ. Ine-air conditioner ezimbini ezitsha zomjikelo ehlotyeni ukuze uhlale upholile kunye nesitovu senkuni ebusika. I-Dwellingup Retreat yindawo yokuhlala enobuhlobo kusapho okanye ingasetyenziselwa iholide yokuzonwabisa.
Indlu ilala izibini ezi-3 kunye nabantwana aba-2 ngokukhululekileyo kodwa ifanelekile ukubaleka kwezibini. Ubuninzi bokulala abantu abadala abasi-8. Indlu inamagumbi okulala ama-4, igumbi lokuhlambela eli-1 eligcweleyo elineshawa eyahlukileyo kunye nebhafu.Igumbi lesine libekwe ngasemva kwendlu kwistudiyo. Indawo yetafile yokutyela abantu abayi-8. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ngesitovu esitsha esiphindwe kabini, umatshini wekofu yembotyi egayiweyo, ijuicer, imicrowave, iblender kunye netoaster kunye neti. Ayizifanelanga izitulo ezinamavili okanye iindwendwe ezingaboniyo.
4.72 out of 5 stars from 150 reviews
4.72 · Izimvo eziyi-150
Kwimizuzu nje embalwa yokuqhuba okanye ukuhamba kukho ibhayisekile entle kunye neendlela zokuhamba ezinje ngengoma yeBibbulmun ekum-800 yeemitha kude. Ukuqhuba imizuzu emihlanu ukuya kwi-Dwellingup Tree Adventure's apho ungasebenzisa imigca ye-zip ukubhabha phakathi kwemithi okanye ungandwendwela iLane Poole Reserve kwaye ubukele iingxangxasi okanye uye kuqubha ezantsi emlanjeni. Kukwakho nololiwe omdala womphunga, othatha ukhenketho emini kwaye unikezela ngezidlo ezithathu ebusuku.
IBhokisi yokuTshixa okuPhambili kunye nokufikelela kwi-WIFI kuya kubonelelwa ngeentsuku ezi-4-5 ngaphambi kokufika kweendwendwe.
Ukungena ngu-2pm kwaye ukuphuma ngu-10am.